Ezilahlwayo intsholongwane isampulu tube
Ezilahlwayo earloop elastic ...
Ukulahlwa kwemaski yobuso kwezonyango
Izinto ezingafunekiyo zesigqubuthelo sobuso esilahlwayo esinikezelwa ziifektri zemveliso zonyango, ezivelisa izinto zonyango ixesha elide, kwaye umgangatho uqinisekisiwe. Kwaye, isiqinisekiso esifanelekileyo semathiriyeli siyahlangabezana nomgangatho wenkqubo yolawulo lwemfundo ye-EN14683. Ngokukodwa, izinto eziphakathi zinyibilike zivavanywe nge-25 gram kwimitha nganye yesikwere kunye ne-BFE (Ukusebenza kweBacterial Filtration) ngama-99% ngaphezulu, ebonelelwa yiSinopec, ebizwa ngokuba kukunyibilika okungcono ...
Ibhendi ye-earloop elahlwayo
Inkampani yethu ingenise izixhobo zemveliso yobuchwephesha kunye netekhnoloji ephezulu yokuvelisa ibhendi yelaptop yendlebe. Eyona nto iphambili ekrwada yi-chinlon kunye ne-spandex. Sinokubonelela ngebhendi yeluphu enemibala emininzi. Le band yendlebe iluhlaza umbala omhlophe, kwaye ububanzi bungu-3mm wokujikeleza. Kufanelekile ukuba balahle uhlobo tyaba zonyango okanye uqhaqho ubuso iimaski. Ngokwesiqhelo, ibhanti yeluphu yendlebe yeemaski zobuso, amandla ayo yi-17 N. Sineengxowa okanye iiroll package Ukuhambisa kungenziwa ngumoya ocacileyo ngokukhawuleza. Ye th ...
Injongo kunye nenkcazo yesampulu yentsholongwane yesampulu 1. Isetyenziselwa ukuqokelela kunye nokuhambisa umkhuhlane weklinikhi, umkhuhlane weentaka (njenge-H7N9), intsholongwane yomlomo-weenyawo, imasisi kunye nezinye iisampulu zentsholongwane kunye ne-mycoplasma, ureaplasma kunye ne-chlamydia specimens 2. Intsholongwane kunye neesampulu ezinxulumene nayo zigcinwa kwaye zihanjiswe kwisithuba seeyure ezingama-48 zikwimeko efrijiweyo (2-8 degrees). I-3.Virus kunye neesampulu ezinxulumene nayo ezigcinwe kwi -80 degrees okanye kwi-nitrogen engamanzi ixesha elide. Inqaku elikhethekileyo: A) Ukuba i-colle ...
Sinokubonelela ngeziqhamo ezinemibala ethandekayo yeelekese, kwaye, iilekese ezenziwe ngokwezifiso zamkelwe. Singumvelisi wokuqala onefektri yakho, enikezela ngexabiso eliphantsi lomzi mveliso kunye nomgangatho ophezulu. Eyona nto iphambili ye-gummy yeelekese yile carrageenan, isiraphu ye-maltose, i-xylitol, umgubo weziqhamo owenziwe ngokwezifiso, kunye nokunye ukutya okongeza ukutya. Singanikezela ngemodeli yemilo yebhere, ezinye iimodeli zemilo zenziwe zenziwe, kwaye zenziwe iintsuku ezingama-20. Ukuza kuthi ga ngoku, imibala yetsheri ebomvu, ilamuni emthubi, iapile eluhlaza, bhlowu, nemfusa zi ...
NO.18-22 Lashan Road, iShizhong District, Jinan, Shandong